Izwe linezinkolo ezinkulu eziningana futhi ngayinye ithi owazo nguNkulunkulu weqiniso, ngakho umuntu angaqiniseka kanjani ukuthi yimuphi uNkulunkulu owukuphela kukaNkulunkulu weqiniso? | IVANGELI LOKUFIKA KOMBUSO
Izwe linezinkolo ezinkulu eziningana futhi ngayinye ithi owazo nguNkulunkulu weqiniso, ngakho umuntu angaqiniseka kanjani ukuthi yimuphi uNkulunkulu owukuphela kukaNkulunkulu weqiniso?
UNkulunkulu wadala zonke izinto, ngakho wenza yonke indalo ibe ngaphansi kombuso Wakhe, izithobe kuwo; uyolawula zonke izinto, ukuze konke kube sezandleni Zakhe. Yonke indalo kaNkulunkulu, kuhlanganise nezilwane, izitshalo, abantu, izintaba, imifula, kanye namachibi—konke kufanele kube ngaphansi kokubusa Kwakhe. Konke okusesibhakabhakeni nasemhlabathini kumele kube ngaphansi kokubusa Kwakhe. Akukho okunye okungakwenza, kumele konke kuzithobe ekuhleleni Kwakhe. Lokhu kwanqunywa uNkulunkulu, futhi kuligunya likaNkulunkulu. UNkulunkulu uyala konke, futhi ulawula konke, isigaba ngasinye ngokohlobo lwaso, ukubeke ngokwezindawo zakho, ngokwentando kaNkulunkulu. Akunandaba ukuthi kukhulu kangakanani, akukho okungedlula uNkulunkulu, futhi konke kukhonza isintu esidalwe uNkulunkulu, futhi akunalutho olungalokotha lungamlaleli uNkulunkulu noma lufune izinto kuNkulunkulu.
Ziningi izinkolo ezinkulu emhlabeni, futhi ngayinye inenhloko yayo, noma umholi, futhi abalandeli basabalele emazweni ngezifunda ezihlukene emhlabeni wonke; wonke amazwe, angaba mancane noma makhulu, anezinkolo ezihlukene ngaphakathi kwawo. Nokho, akukhathaliseki ukuthi zingaki izinkolo ezikhona emhlabeni jikelele, bonke abantu emhlabeni uhlangene namazulu ekugcineni baphila ngaphansi kokuqondiswa nguNkulunkulu oyedwa, futhi impilo yabo ayiqondiswa ikhanda noma umholi wenkolo othile. Okungukusho ukuthi isintu asiholwa inhloko noma umholi wezenkolo othile; esikhundleni salokho isintu sisonke siholwa nguMdali, owadala amazulu nomhlaba, kanye nezinto zonke, futhi wadala nesintu—futhi lokhu kuyiqiniso. Nakuba umhlaba unezinkolo eziningi ezinkulu, akukhathaliseki ukuthi zinkulu kangakanani, zonke zikhona ngaphansi kokubuswa uMdali futhi azikho kuzona ezingadlula isilinganiso salo mbuso. Ukuthuthuka kwesintu, inqubekela phambili kwezokuhlalisana kwabantu, ukuthuthuka kwezesayensi yemvelo—ngakunye kungehlukaniswe namalungiselelo oMdali, futhi lo msebenzi akuyona into engenziwa umholi wenkolo othile. Izinhloko zezinkolo zimane zingabaholi benkolo ethile, futhi ngeke zimele uNkulunkulu noma lowo owadala amazulu nomhlaba kanye nezinto zonke. Izinhloko zenkolo zingahola bonke labo abakuleyo nkolo iyonke, kodwa ngeke zikwazi ukubusa zonke izidalwa ngaphansi kwamazulu—leli iqiniso elivunywayo emhlabeni wonke. Izinhloko zenkolo zimane zingabaholi, futhi ngeke zime zilingane noNkulunkulu (uMdali). Zonke izinto zisezandleni zoMdali, futhi ekugcineni zonke ziyobuyela ezandleni zoMdali. Isintu senziwa nguNkulunkulu ekuqaleni, futhi akukhathaliseki inkolo, wonke umuntu uyobuyela ngaphansi kokubuswa nguNkulunkulu—lokhu akunakugwemeka. UNkulunkulu kuphela okunguye oPhezukonke phakathi kwezinto zonke, futhi umbusi ophakeme kunabo bonke phakathi kwezidalwa zonke kufanele naye abuyele ngaphansi kokubusa Kwakhe. Noma ngabe isikhundla somuntu siphakeme kangakanani, ngeke akwazi ukuletha isintu esiphethweni esifanele, futhi akekho okwazi ukuhlela zonke izinto ngohlobo lwazo. UJehova Uqobo Lwakhe owadala isintu futhi wasihlela ngohlobo, futhi uma isikhathi sokuphela sifika uyokwenza umsebenzi Wakhe Uqobo Lwakhe, ehlela zonke izinto ngohlobo lwazo—futhi lokhu ngeke kwenziwe inoma ubani ngaphandle kukaNkulunkulu. Izigaba ezintathu zomsebenzi ezenziwe kusukela ekuqaleni kuze kube namuhla zonke zenziwa nguNkulunkulu Uqobo Lwakhe, futhi zenziwa nguNkulunkulu oyedwa. Iqiniso ngezigaba ezintathu zomsebenzi yiqiniso lobuholi bukaNkulunkulu besintu sonke, iqiniso ongekho ongaliphika. Ekugcineni kwezigaba ezintathu zomsebenzi, zonke izinto ziyohlelwa ngohlobo futhi zibuyele ngaphansi kokubuswa nguNkulunkulu, ngoba emhlabeni jikelele kukhona lo Nkulunkulu oyedwa kuphela, futhi azikho ezinye izinkolo. Ongazange awudale umhlaba ngeke akwazi ukuwufikisa ekugcineni, kepha Lowo owadala umhlaba ngokuqinisekile uzowufikisa ekugcineni, ngakho uma umuntu engakwazi ukuletha inkathi esiphethweni futhi amane esiza umuntu ukuthi alungise umqondo wakhe, impela ngeke abe uNkulunkulu, futhi ngokuqinisekile ngeke abe yiNkosi yesintu. Ngeke akwazi ukwenza umsebenzi omkhulu kanjalo; munye kuphela ongenza lo msebenzi onjalo, futhi bonke labo abangakwazi ukwenza lo msebenzi ngokuqinisekile izitha ngaphandle kwaNkulunkulu. Uma beyinkolo-ze, abahambisani noNkulunkulu, futhi uma bengahambisani noNkulunkulu, ngakho bayizitha zikaNkulunkulu. Wonke umsebenzi wenziwa yilo Nkulunkulu oyedwa oyiqiniso, kanti nomhlaba wonke nezulu lonke likhuzwa ngulo Nkulunkulu oyedwa. Akukhathaliseki ukuthi usebenza kwa-Israyeli noma eShayina, akukhathaliseki ukuthi umsebenzi wenziwe uMoya oNgcwele noma inyama, konke kwenziwa uNkulunkulu Uqobo Lwakhe, futhi kungenziwe omunye. Yingoba kanye unguNkulunkulu wesintu sonke yingakho Yena esebenza ngokukhululeka, engacindezelwe yinoma imiphi imibandela-futhi lokhu umbono omkhulu kunayo yonke.
kwesithi “UKristu Wezinsuku Zokugcina Kuphela Onganika Umuntu Indlela Yokuphila Ingunaphakade” encwadini ethi Izwi Livela Lisenyameni
Okulandelayo: Singaqiniseka kanjani ukuthi uNkulunkulu uSomandla unguJesu obuyile?
Impendulo: Uma kuza ekulindeni iNkosi ukuthi yehle ngamafu, akumele sincike embonweni womuntu nendlela acabanga ngayo! AbaFarisi benza iphutha elikhul…
Iyiphi indlela amakholwa okufanele ehlukanise ngayo izwi likaNkulunkulu ukuze aqinisekise ukuthi liyindlela yeqiniso?